I-Helvetica iyahlaziywa kwaye izalwe, iHelvetica Ngoku | Abadali be-Intanethi
I-Helvetica iyahlaziywa kwaye iyazalwa, iHelvetica Ngoku
Umthombo i-typeface, eyilwe nguMax Miedinger kunye no-Edouard Hoffman, iHelvetica, itshintshiwe. Emva kweminyaka emininzi yembali, apho namhlanje siyazi njengeHelvetica Ngoku. Ukuguqulwa kokugqibela okwaziwayo kwefonti kungo-1982, xa yathiywa kwakhona ngokuba yi-Helvetica Neue.
Aba bayili babini yayingoobawo, emva phayaa ngowe-1957, bohlobo lochwethezo lweNeue Haas Grotesk. Kwiminyaka emine emva koko, inkampani yeTypeface yafumana amalungelo kule fonti. Ke ukuba siyijonga ngolo hlobo, yile nkampani yabhaptiza ngegama esilaziyo namhlanje.
Ngaphantsi kwegama, I-Helvetica Ngoku, isitudiyo seMonotype, yenze usapho olutsha lohlobo onjongo yakhe ikukulungelelanisa ukusetyenziswa okutsha kwihlabathi loyilo, kunye nakwizikrini zezixhobo ezahlukeneyo zedijithali; eziphathwayo, oomabonakude, iikhompyutha, njl.
1 Ifonti entsha iyazalwa: Helvetica Ngoku
2 Ngaba iHelvetica iyimfuneko ngoku?
Ifonti entsha iyazalwa: Helvetica Ngoku
Uhlengahlengiso olwenzeke kwifonti yokuchwetheza, ngokusekelwe kumsebenzi owenziwe ngabadali bayo abakhulu, uMax Miedinger kunye no-Edouard Hoffmann.
IHelvetica iye yaba yenye yezona fonti zisetyenziswa kakhulu kwihlabathi. Kodwa akazange abe nethamsanqa kulo lonke eli bali, emva kwexesha lokuthandwa, i-Helvetica, ukusuka komnye umzuzu ukuya kwelinye yawela ekusebenziseni.
Ngesi sizathu, umlawuli wenkampani yeMonotype wayalela ukuba kuhlengahlengiswe bonke abalinganiswa abaqukiweyo. Injongo yolu hlaziyo ibikukufezekisa i-typography entsha enomtsalane.
Kulandela eso sigqibo somalathisi weMonotype, kwazalwa iHelvetica Ngoku. Kule inguqulelo ehlaziyiweyo, sifumana iindidi ezingama-48 ezahlukeneyo, ezidityaniswe ngokweendidi ezintathu, umbhalo, micro kunye nomboniso.
El isitayile esincinci, yenye yezinto ezintsha ezivezwa ngolu hlobo lokubhala, sisimbo esihamba kunye notshintsho lokuchwetheza. Okufana nezithuba, iimilo zabalinganiswa, iingongoma ezinkulu ze-accent, njl. exhasa ukufundeka ngcono, ukuba ivela kwiisayizi ezahlukeneyo zesikrini.
IHelvetica Ngoku Bonisa, kujongwe ukutshatisa i-kerning xa usebenzisa iisayizi ezinkulu zefonti. Kwaye isimbo, Helvetica Ngoku Umbhalo, ufuna ukwenza ukufunda kube lula yezicatshulwa ezinoxinaniso oluninzi.
Kwelinye icala, i iintsimbi ezibandakanya i-Helvetica Ngoku, zifumaneka ukusuka kumgca weenwele, ukuya kumnyama owongezelelweyo. Oko kukuthi, ukusuka kuyilo oluhle kakhulu, ukuya kwelinye elityebileyo elongezelelweyo.
Njengoko sikhe saphawula ekuqaleni kolu papasho, ukuchwetheza kuye kwahlengahlengiswa ngaphambi kwale sithetha ngayo.
Kwakukho Ngo-1983, apho i-Helvetica Neue typeface yenziwa, apho abanye abalinganiswa bayo baye balungiswa., ukuphucula iimpawu zokubhala kwanobude.
Kodwa kuye kwaba njalo I-Helvetica Ngoku, xa i-Helvetica typeface, iphinde yahlelwa ngokutsha. Ekubeni utshintsho luye lwabonakala ngakumbi, kwaye i-typeface enembali eninzi iye yafunwa ukuhambelana namaxesha esiphila kuwo.
ngamnye wakhe glyphs, uye wadlula kwinkqubo yokuzoba ngokutsha kunye nohlengahlengiso, ukubuyisela imvelaphi ye-Neue Sans Grotesk kunye nokufezekisa loo njongo yokulula kunye nokufundeka.
Ngaba iHelvetica iyimfuneko ngoku?
IHelvetica typography ikhuphe inguqulelo entsha, iHelvetica Ngoku. A typeface leyo iqinisekisiwe ukuba yiyo kuphela oya kuyisebenzisa xa ujongene noyilo lwexesha elizayo izicelo zokuchwetheza. I-typeface yayo yonke into kunye nomntu wonke.
I-Helvetica yaba i-typeface ethandwayo kodwa kwangaxeshanye ithiywe ngabayili abaninzi. Kwaye uya kucinga, olu hlobo lokubhala lwalunganelanga kwihlabathi loyilo. Ewe, impendulo nguhayi obambekayo.
Le nguqulo intsha, Iphendula ngokuchanekileyo ekuveliseni kwayo kwiimeko eziphantsi neziphezulu. Ukongeza ekusebenzeni ngokuchanekileyo, kwizikrini ezincinci nezinkulu. Kwaye ngendlela efanayo, kwimisebenzi yedijithali okanye eprintiweyo kwizinto ezahlukeneyo.
Kukho abaqulunqi abaninzi, ababiza ukubonakala kwe I-Helvetica Ngoku, njengokuphefumla komoya omtsha, kwaye kuloo nto iinxalenye zayo zifana nesipho. I-typeface, eneendlela ezingcono kunye nemisebenzi, kunye neeglyphs ezintsha. Ithathwa njengeyona Helvetica ilungileyo ukuza kuthi ga ngoku, iyimfuneko kwaye yenziwe ngokutsha.
Enye yezona mpawu zibalaseleyo zolu chwethezo kukuba kwileta unobumba omkhulu R, kukho iinketho zeglyph. Oku kunjalo nangonobumba abancinane i., onokhetho olwahlukileyo kwisimboli sakhe seziphumlisi, ukwazi ukuba ngqukuva.
Ngoko ke, kunokuthiwa le ruyilo lweza ngexesha elifanelekileyo. Yintoni ekhokelele ekubeni ibe yi-typography eyimfuneko kubayili abadibanisa uyilo olulungileyo kunye nokufundeka okulungileyo kunye nokuguquguquka.
Ngo-2007, i-premiere Uxwebhu malunga neHelvetica. Ukusukela ngoko, siye sakwazi ukubona nokuqonda indlela itekhnoloji eqhubela phambili ngayo kunye necala layo, i-typography efanayo iyavela.. Kubalulekile ukuba iifonti zihlaziywa rhoqo kumajelo osasazo obuchwepheshe avelayo.
I-Helvetica yenye ye Iifonti zokuchwetheza ezisetyenziswa kakhulu kokubini kuyilo nangaphandle kwalo mmandla. Zombini iinkampani kunye nabantu abanomdla wokufumana inguqulelo entsha kuya kufuneka bahlawule ukuze bafumane ilayisensi.
La Ukwamkelwa kolu hlobo lutsha kwakumnandi. Iqela labo loyilo lithe liyazingca ngesiphumo sokugqibela esifunyenweyo. UCharles Nix, umlawuli weMonotype, uthethe ngeHelvetica Ngoku, esithi yifonti enika abaqulunqi amandla aphezulu kunye nenkululeko yokuyila, ngokwendlela yokubonakalisa i-typographic.
Yinguqulelo, hlanganisa izitayile zakho ezahlukeneyo kwipakethi enye ngendlela elungelelanisiweyo, evumela abaqulunqi ukuba baxube, batshatise kwaye bazenzele iiprojekthi zabo.
Enkosi kuwe ikhathalogu ebanzi yezimbo, abayili banokungena ulwazi oluninzi, kwindawo encinci. Le ngongoma efanelekileyo, kuyilo lwewebhu kunye noyilo oluya kufakwa kwiinkxaso ezincinci, umzekelo isikrini se-smartwatch.
Yiyo ifonti isetyenzwe ukusuka ekuqaleni, ke iye yaba luchwethezo olugqibeleleyo. IHelvetica ngoku imele yonke into eyiHelvetica. Sele ibe lolona lwimi luthandwayo kwihlabathi.
Se ihlala inyanisekile kuyilo lwayo lokuqala, ngobuhle kunye nobugocigoci. Kodwa oku kuyilwa ngokutsha, bongeze amanqaku aquka angcono anika ukuguquguquka okukhulu, ukuqhelana namaxesha amatsha.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Idizayini yeMifanekiso » I-Helvetica iyahlaziywa kwaye iyazalwa, iHelvetica Ngoku